धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको हाकिम हुन प्रारम्भिक दौडधूप सुरु, कहिले लाग्ला टुंगो ?
नेप्सेका सीइओ साउदले राजीनामा दिएका हुन् । साउदले भने पदीय मर्यादा विपरीत कुनै काम नगरेको हुँदा यस सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पुर्याउन भन्दै राजीनामा दिएका हुन् । यता, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानालाई भने निलम्बन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा भदौ १६ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले ढुंगानालाई पदबाट निलम्बन गरी छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैकारण दुवै निकायमा नियमित (सामान्य) काम बाहेक कुनै पनि नीतिगत काम हुन सकेको छैन ।
धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा ब्रोकरहरुले साउन १ गतेदेखि नै आफ्नो अलग्गै टीएमएस ल्याउने भने पनि भदौ अन्तिम सातासम्म विनियामवली बोर्डबाट स्वीकृत नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गत वर्ष नै दिने भनिएको कमोडिटी एक्चेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि अघि बढेको छैन । यस्तै, साउनको दोस्रो सातासम्ममा बेग्लै एसएमइज प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि नेप्सेलाई निर्देशन दिने बोर्डको कार्यतालिका पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यता, धितोपत्र बोर्ड र नेप्से नेतृत्वविहीन बन्न पुगेपछि राफसाफ कोष खडा गरी रकम जम्मा गर्ने योजना प्रभावित बन्न पुगेको छ । १ साउनबाटै कार्यान्वयनमा ल्याउन बोर्डले निर्देशन दिए पनि बोर्ड र नेप्से आफैं नेतृत्वविहीन बनेपछि कोष खडा गर्ने र आवश्यक रकम जम्मा गर्ने योजना प्रभावित बनेको हो ।
कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बोर्डले ४ जेठमा नै पत्र काटेर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सीडीएससी) र ब्रोकरलाई निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, दुवै नियामकीय संस्थाका अरु केही महत्वपूर्ण कामसमेत यतिबेला ओझेलमा परेको छ ।
दुवै नियामक निकायको नेतृत्व हात पार्नका लागि सुरु भयो दौडध्रूप
दुवै नियामकीय संस्था नेतृत्वविहीन हुँदा यो अवसर हात पार्नका लागि अहिले केही व्यक्तिहरुको दौडधुपसमेत सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले २ नियमक निकायको प्रमुख बनाइदिन आग्रह गर्दै विभिन्न व्यक्तिहरु मन्त्रालय धाउने गरेका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पुँजी बजारका दुवै संस्थाको प्रमुख हुने अभिलाषासहित भेटघाट गर्ने क्रम बाक्लिएको छ ।
यसरी मन्त्रालय धाउनेमा केही पुँजी बजारका परिचित अनुहार छन् भने केही यो क्षेत्र भन्दा बाहिरको पनि रहेका छन् ।’ ‘प्रारम्भिक चरणकै भेटघाट रहेको र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको छानिबन चलिरहेकाले अहिले नै आकांक्षीहरुको नाम सार्वजनिक गरिनहाल्यौं,’ अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीले भने । मन्त्री, सचिवसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुलाई फोन गराउने र विभिन्न च्यानलमात्र भेटघाट गर्नेक्रम पनि सुरु भएको स्रोतको भनाई छ ।
नयाँ नेतृत्व चयनका लागि पनि विभिन्न प्रक्रियाहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण यी संस्थामा नयाँ नेतृत्व आउन केही समय लाग्ने देखिन्छ । नेप्सका सीइओ साउदले पदबाट राजीनामा नै दिइसकेका छन् भने बोर्ड अध्यक्ष ढुंगाना निलम्बित भएका छन् । कानुन बमोजिम उनलाई सरकारी हानि–नोक्सानी पुर्याए बापत तत्काल निलम्बन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उनीमाथि छानबिन गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरेको छ । यो समितिको सदस्यमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका पूर्व सदस्य डा. नारायण पौडेल विज्ञ सदस्य छन् । समितिलाई १५ दिनको समयावधि दिइएको छ । तथापि, यो समितिले निर्दोष साबित गरेमा ढुंगाना नै बोर्ड अध्यक्ष रहनेछन् ।
धितोपत्र ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ र १२ ले अध्यक्षले बोर्डलाई हानि–नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पुँजी बजारको विकास विपरीत हुने गरी काम–कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा उनलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तथापि, ढुगांना अदालत जाने सम्भावना पनि उतिकै रहन्छ ।